Isikhungo esithandekayo sedolobha elidala. I-WIFI - I-Airbnb
Isikhungo esithandekayo sedolobha elidala. I-WIFI
U-Antonio Ungumbungazi ovelele
Sanibona nonke, Igama lami ngu-Antoni
nefulethi lami edolobheni elidala elingokomlando lase-Santiago de compostela liyatholakala ukuvumela. Imaphakathi ngokuphelele futhi iseduze nawo wonke amasevisi (ukuhambahamba imizuzu engu-5 kuphela ukuya eKathedral edumile)
nefulethi lami edolobheni elidala elingokomlando lase-Santiago de compostela liyatholakala ukuvumela. Imaphakathi ngokuphelele futhi isondelene nawo wonke amasevisi (ukuhambahamba kwemizuzu engu-5 kuphela ukuya eKathedral edumile), kodwa endaweni ethulile eluhlaza lapho ungadumaza khona ngemva kokubuka indawo usuku olunzima ngoba inakho konke okudingayo ukuze uhlale kahle kuleli dolobha elibukekayo.
Iyisicaba itholakala enkabeni yedolobha elidala elihle lase-Santiago. Yize isenhliziyweni yakho konke futhi iseduze nawo wonke amasevisi, i-flat ngokwayo iyindawo ethulile yokubeka ikhanda lakho ngemva kokubuka indawo usuku olunzima. Isanda kulungiswa futhi iziqhayisa ngazo zonke izixazululo zemodali ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngangokunokwenzeka (umshini wokuwasha, umshini wokomisa izinwele kodwa okubaluleke nakakhulu I-WIFI ne-Netflix). Le ndawo inamathuba angenamkhawulo uma kuziwa ekudluliseleni isikhathi esifana nezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela, imidlalo yaseshashalazini, amakhonsathi, amamyuziyamu, izakhiwo zomlando, imitapo yolwazi, inyuvesi kanye nemakethe edumile ye- de abastos, indawo yesibili evakashelwa kakhulu e-Santiago ngemuva kwe-cathedral. Kulapha phambi kwemakethe (ukuhamba nje okufushane kwemizuzu engu-5 ukusuka endaweni eyisicaba) ukuthi uzothola isiteshi sesitimela uma ufisa ukuhamba ngaphandle kwedolobha.
Ifulethi lesibili, (akukho ukuphakamisa okutholakalayo ezakhiweni eziningi edolobheni elidala) lisendaweni efanele ngenxa yeqiniso lokuthi yize ingaphakathi ledolobha elidala lizungezwe yimvelo, eduze nepaki le-Belvis, indawo eluhlaza okotshani lapho ungaphumula khona ngosuku olunelanga olukunikeza okuhle kakhulu phakathi nokuhlala kwakho.
Lena indawo ekahle kakhulu yabantu abashadile. Le ndawo inikeza ikamelo lokulala elilodwa elinombhede olala abantu ababili (135 x 190), igumbi lokuphumula eliphelele elinesidlali-marekhodi noma isiginci uma uzizwa unomculo, ikhishi laseMelika elinehhavini, i-microwave, isiqandisi negumbi lokugezela elihlanganisa i-shower yokuzivocavoca.
Ukukhula lapha e-Santiago ngiyazi ukuthi kufana nengemuva lesandla sami futhi ngikhuluma isiNgisi nesi-Spanish. Ngiyajabula kakhulu ukusiza nokweluleka uma udinga noma yiluphi usizo kuyo yonke imisebenzi yokuhlela endaweni efana nokuqwala izintaba, imizila yedolobha, imizila yamasiko, uhambo oluya emabhishi amahle ase-Galician, amacebiso okuthi ungadla kuphi noma uphuze kuphi noma yiziphi ezinye izindawo ezithandwayo.
Uma ufuna ifulethi lekhwalithi, eliseduze nawo wonke amasevisi kodwa enokuthula okwanele ukuze uthole ukulala okuhle ebusuku futhi eduze nemvelo lapho ungathola khona ngempela ukunambitheka kwendlela yokuphila ye-galician khona-ke lena yindawo eyisicaba kuwe.
4.88 · 421 okushiwo abanye
Inombolo yepholisi: TU986D RITGA-E-2017-008377